ग्याजेट्स अपडेट - पाँच क्यामेरा भएको पहिलो स्मार्टफोन, एन्ड्रोइड पाईमा चल्ने
काठमाडौं । गत महिना बार्सिलोनामा आयोजित मोबाइल वल्र्ड कांग्रेसमा एचएमडी ग्लोबलले नोकिया ९ प्योरभ्यु सार्वजनिक गरेको थियो । यो स्मार्टफोन पाँचओटा लेन्स क्यामेरा भएको पहिलो स्मार्टफोन हो । यसमा १ सय २८ जीबीको इन्टर्नल स्टोरेज रहेको छ । कम्पनीले यो स्मार्टफोन छिटै नै भारतमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यससँगै अबको केही समयमा यो स्मार्टफोन नेपालमा पनि आउने अपेक्षा छ । अहिलेसम्म भारतमा यसको मूल्य कति रहने भन्ने कुराको जानकारी दिइएको छैन । तर, यसलाई ५० हजार भारुसम्म पर्नसक्ने बताइएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
सामसुङको एम् सिरिज नेपालमा लन्च
काठमाडौं । निकै प्रतिक्षारत सामसुङको एम् सिरिज नेपालमा लन्च भएको छ । नेपालको पहिलो र ठूलो मोबाइल वितरक कम्पनीको रुपमा रहेको, मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी सामसुङले आफ्नो नयाँ मोडल सामसुङ ग्यालेक्सी एम् टेन नेपाली बजारमा लन्च गरेको हो । सामसुङले ग्यालेक्सी एम् टेन मोडेलको फोन स्मार्ट डोकोबाट १३ हजार ७ सय ९० रुपैयाँमा ग्राहकले किन्न सक्ने जनाएको छ । स्मार्ट डोकोले रिङरोडभित्र फ्रि डेलिभरीको व्यवस्था गरेको छ भने दिउँसो १ बजे अगाडि अर्डर गरेको सामान त्यही दिनमा ग्राहकसामु उपल्बध गराउने जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
रिचार्जर एपमा १ रुपैंयामा क्रिसमस क्याप तथा ४९९ मा मोबाइलसँगै ४ वटा अफर
काठमाडौं । सबैभन्दा बढि सेवा समेटिएको मोबाइल एप रिचार्जरको नया भर्सन अपडेट भएको छ । साथै रिचार्जरको लोगो अंकित झण्डा दक्षिण अमेरिकाको अकोनकागुवा शिखरमा फहराइएको छ । यसै उपलक्ष्यमा भर्सन अपडेटसँगै क्रिमस डेको अवसर पारेर रिचार्जरले ४ वटा आकर्षक अफर सञ्चालन गर्ने भएको छ । अफर अन्तरगत रिचार्जरको मोबाइल एपबाट एक रुपैंयामा क्रिसमस क्याप खरिद गर्न सकिने छ । रिचार्जरका प्रयोगकर्ताले डिसेम्बर २२ तारिख शनिबारका दिन दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्ममा यो अफर अन्तरगत क्याप अर्डर गर्नु पर्ने हुन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
स्मार्टफोन मोबाइलको भविष्य,अझ स्मार्ट बनाउने होडबाजी
वासिङ्टन । एक दशकसम्म विश्वकै सबैभन्दा बढी बिक्रीको रेकर्ड बनाएको स्मार्टफोनको ठाउँमा अब नयाँ कुन उपभोग्य वस्तु आउला ?यसको उत्तर सजिलो छैन, तर प्रविधि क्षेत्रमा यसबारे चर्चा शुरू भएको छ । एप्पल र सामसुङजस्ता पहिलो श्रेणीका उत्पादकहरुले उपभोक्ताका लागि नयाँनयाँ विशेषतायुक्त स्मार्टफोन उत्पादन गरिरहे पनि पछिल्लो समय स्मार्टफोनको बिक्री घट्न थालेको पाइएको छ । विश्वका ठूला बजारमा यी फोनको मागमा कमी आएको छ । स्मार्टफोनको प्रयोगलाई जीवन्त राख्न चाँडै प्रयोगमा आउन लागेको पाँचौं पुस्ताको तारविहीन नेटवर्क अर्थात् फाइभजीले सहयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
दराजले ल्यायो नेपालमा पहिलो पटक ठूलो सेल डे
काठमाडौं । नेपालको न. १ अनलाइन मार्केट, दराजले नेपालमा पहिलो पटक ११.११ संसारको सवैभन्दा ठूलो सेल डे लिएर आउने भएको छ । नयाँ दराज एपको शुरुवात पछिको यस पहिलो विशाल अनलाइन मेलामा ग्राहकहरुले व्यक्तिगत तथा नवउत्कृष्ट क्रियाकलापहरुको अपेक्षा गर्न सक्ने छन् । ११.११ के हो ? ११.११ को शुरुवात सन् २००९ मा भएको थियो जब दराजको अभिभावक कम्पनी, अली बाबाले यसलाई ब्ल्याक फ्राइडेको एशियालीे स्वरुपमा अवस्थित गरायो । दश वर्षको द्रुत गती पछि ११.११ सेल नेपालको यात्रा गर्न तयार छ । ब्ल्याक फ्राइडे भन्दा चार गुणा ठूलो रहेको यस एक दिने उत्सवको बिक्री आँकडा अतुलनिय छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाको दुरुपयोग र अवैध कल वाईपास भीओआईपी रोक्न सरकारले उच्चस्तरीय प्रविधि भित्र्याउने भएको छ ।इन्टरनेटको पँहुच गाउँ तहसम्म पुगेपनि उपभोक्ता ठगिने क्रम उच्च भएपछि नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा कदम चाल्न लागेको हो । इन्टरनेटको खरिदमा सेवा प्रदायकले बढी रकम असुल्ने तथा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो वढेपछि संञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सम्झौता अनुसारको सेवा मापन गर्ने मेसिन खरिद गर्ने तयारी गरेको हो ।	थप पढ्नुहोस्
सिटीसी मलमा मोबाइल हब, दशैं धमाकामा ६० प्रतिशतसम्म छुट
कठमाडौं । राजधानीको पार्किङ समस्यालाई ध्यानमा राखेर निशुल्क पार्किङ सहित सुनधारामा रहेको सिटीसी मलमा मोबाइल हब सञ्चालनमा आएको छ । मोबाइल पारखीहरुका लागि नयाँ गन्तव्यको अवधारणा सहित एक कार्यक्रमका बिच आज सिटीसी मोबाइल हबको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो । मोवाइल सम्बन्धि सबै सेवा एकै छाना मुनी दिने लक्ष्य सहित दशैंको पुर्वसन्ध्यामा दशैं धमाका मोबाइल मेलाको आयोजना गर्दै मोबाइल हबले आफ्नो उपस्थिती जनाएको हो । नयाँ मोवाइल गन्तव्यका रुपमा लिइएको मोबाइल हबले भारी छुट सहित मोबाइल मेला सुरु गरेको हो ।	थप पढ्नुहोस्
१४ साउन, काठमाडौं । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले हालै ‘उत्सवको उमंग विदेशमा भेटौं आफ्नासँग’ योजना प्रस्तुत गरेको छ । विभिन्न कारणले गर्दा विदेशमा रहेका दशैंमा स्वदेश आई आफ्नो परिवारसँग दशैं मनाउन नपाउने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै आफन्त स्वयम् नै विदेशमा गई आफ्नासँग दशैं मनाउन पाऊन् भनी यो योजना प्रस्तुत गरिएको कम्पनीले बताएको छ । यो योजना यही साउन ८ गतेदेखि साउन ३० गतेसम्म मात्र लागू गरिएको छ । प्रस्तुत योजनामा सहभागी हुन योजना अवधिभर सामसङ आउटलेटहरुबाट कुनै पनि सामसङ स्मार्ट फोन खरिद गर्नु पर्नेछ ।	थप पढ्नुहोस्
शक्तिशाली ब्याट्री जडान गरिएको इनफोकसको स्मार्टफोन नेपाल भित्रदै
११ साउन, काठमाडौं । इनफोकसले निर्माण गरेको ५ हजार एमएएचको शक्तिशाली ब्याट्री जडान गरिएको मोबाइल फोन नेपालमा भित्रने भएको छ । फोनमा जडान भएको ब्याट्रीले २३ घण्टा कुरा गर्न मिल्ने साथै ८ सय १६ घण्टासम्म ब्याट्रीले काम गर्ने बताइएको छ । टर्बो –५ मा ५।२ इन्चको ७२० पीको डिस्प्ले रहेको छ । क्वाडकोर मिडियाटेक प्रोसेसर रहेको फोनमा एन्ड्रोइड भर्सन ७।० रहेको छ । यसबाहेक फोनमा २ अथवा ३ जीबीको र्यामको विकल्प छ भने इन्टरनल मेमोरी १६ तथा ३२ जीबीको रहेको छ । साथै ३२ जीबीसम्मको मेमोरी बढाउन सकिन्छ । मेटल बडी रहेको फोनको पछाडीपट्टी फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
ए, वसन्त पो आएछ ...
एन्फाले बर्षको सर्वोत्कृष्ट ...
जनताको जलविद्युत् : माथिल्लो ...